जोगमाया महतो थारुकाे सपना |
जोगमाया महतो थारुकाे सपना
प्रकाशित मिति :2017-05-11 16:50:07
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशको घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको पहिलो चरणको निर्वाचनको मिती नजिकिदै गएपछि दलहरु आ-आफ्नो चुनावी प्रचारलाई तिब्र बनाएका छन्।
यसैक्रमम मुख्य राजनीतिक दल नेकपा एमालेले पनि तीन वटै प्रदेशमा आफ्नो चुनावी अभियान तिब्र पारेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा संविधानअनुसार समावेशी अवधारणलाई लागु गर्दै एमालेले स्थानीय ठाउँ, परिवेश, आवश्यकताअनुसार उमेद्‍वारहरु चयन गरेको छ।
समावेशीतालाई ध्यानमा राख्दै एमालेले मुख्यतः परासी, चितवन जस्ता थारु आदिवासीको बसोवास रहेको जिल्लाबाट थारु समुदायको उमेद्‍वारलाई मैदानमा उतारेको छ।
यसैक्रममा परासी जिल्लाबाट एमालेले दुई जनालाई उमेदवार बनाएको छ। एमालेले परासीको मध्यविन्दु नगरपालिकाको उपप्रमुखमा जोगमाया महतो थारु र कावासोती नगरपालिकाबाट वीरेनशङ्कर मर्दनियाँ थारुलाई उपप्रमुखको उमेदवार बनाएको छ।
यस्तै चितवन जिल्लाबाट एमालेले खैरहनी नगरपालिको प्रमुखमा लालमणि चौधरी र माडी नगरपालिका उपप्रमुखमा तारा काजी थारुलाई उमेदवार बनाएको छ।
यसै क्रममा परासी जिल्लाको मध्यिवन्दु नगरपालिकाको उपप्रमुखका उमेदवार जोगमाया महतो थारुको उमेदवार परिचय यहाँ राखेका छौ।
को हुन् जोगमाया महतो थारु ?
नवलपरासी (हालको परासी)को मध्यविन्दु नगरपालिका-८ मा जन्मिएकी जोगमाया महतो थारु परासीका थारु समुदायका अगुवा महिला हुन्। वि.सं. २०४० सालमा किसान परिवारमा जन्मिएकी जोगमाया जन्मदै एमाले परिवारमा जन्मिएकी थिइन्।
उनकी आमा र मामाहरु एमाले राजनीतिमा थिए। मामाहरु अहिले पनि राजनीति गर्छन् तर आमा बिरामी भएका कारण अहिले स्थगीत गरेकी छिन्।
सानैदेखी राजनीतिक चेतना धेरथोर पाएकी जोगमायाले विद्यार्थी कालदेखि राजनीति राम्रोसँग बुझ्‍न थालेकी थिइन्। विद्यार्थी, महिला संघसंस्था, सहकारी हुँदै समाजका विभिन्‍न गतिविधिमा समेत सक्रिय जोगमाया २०६० सालदेखि राजनीतिमा अझ सक्रिय भएका थिए।
जिल्लामा महिला शसक्तिकरण तथा महिला तथा बालवालिकाको अधिकारका लागी सक्रिय जोगमाया अकलादेवी महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नवप्रतिभा सहकारी संस्थामा समेत आवद्ध भएर काम गरिन्।
नेकपा एमालेको सँगठित सदस्यता भने २०७१ सालमा लिएकी जोगमायाले मध्यविन्दु नगरपालिकामा एमालेको राम्रो भएकाले एमालेलाई अरु कसैले जित्‍न नसक्ने बताए। ‘मेरो पारिवारीक माहौंल नै एमाले हो। त्यसैले सानै उमेरमा म राजनीतिमा आवद्ध भए-उनले भनिन, अहिले म राजनीतिमा आवद्ध भएको छु। हाम्रो नगरपालिकामा एमालेको एकदमै राम्रो छ। त्यसैले यहाँ एमाले बाहेक अरु कसैले जित्दैन।’
के छन् योजनाहरु ?
मध्यविन्दु नगरपालिका पूर्व-पश्‍चिम राजमार्गको मध्यक्षेत्रमा पर्ने नगरपालिका हो। तराई क्षेत्रमा अवस्थित यो नगरपालिका निकै चहलपहल हुने ठाउँ समेत हो।
त्यसैले मध्यविन्दु नगरपालिकालाई सुन्दर र समृद्ध नगरपालिका बनाउने योजना एमालेको रहेको जोगमायाले बताइन्। महिला बालवालिकाको शसक्तिकरण गर्नमा लामो समय काम गरेकी उनी परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने, महिला उद्दमशिलता बढाउने योजना रहेको उनले बताइन्।
‘हामी मध्यविन्दु नगरपालिकालाई परिवर्तन गर्न चाहान्छौ। यो नगरपालिका महिला तथा बालवालिका सुरक्षित हुनुपर्छ त्यसका लागि सुरक्षित तथा बालमैत्री नगरपालिका बनाउनेछौ। हामीले हाम्रा हरेक जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नेछौ-जोगमायाले भनिन्, यो नगर बालश्रम मुक्त नगर हुनेछ। पूर्णतः बातावरणमैत्री नगर बनाउनेछौ। युवालाई उसको क्षमता अनुसार काम गर्न सक्ने रोजगारको व्यवस्था गर्नेछौ।’
नगरको विकासका लागि विशेषगरी पहाड र तराईसँग जोडिएकाले पहाडको मगर वस्तीको विकास गरी त्यसलाई पर्यटकीय विकासका हिसाबले विकास गरिने। र तराईमा थारु समुदायको बसोबास रहेकाले थारु संस्कार, संस्कृतिको विकास गरी पर्यटकीय हवका रुपका विकास गरिने एमाले योजना रहेको जोगमायाले बताइन्। मध्यविन्दुको तराइमा नारायणी नदी पनि भएकाले र्‍याफ्टीङ लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताइन्।
बाटोघाटो पुरानो भइसकेको र साघुरा पनि भएकाले बाटोघाटोको विकास पहिलो चरणमा गरिने एमालेको योजना छ। ‘हामीसँग निकै पहिले निर्माण गरेका बाटोहरु छन्, जो निकै साघुरा छन् तिनलाई हामी फराकिलो बनाउदै लैजाने छौ-जोगमायाले भनिन, साथै नयाँ बाटोको निर्माण सडकको उत्रउन्‍नती। शिक्षामा गुणस्तरियता। सिचाइ तथा खानेपानी, सरसफाइ युक्त नगर हामी बनाउनेछौ। यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो।’
नगरक्षेत्रमा रहेको सुकुम्वासी समस्या लगायतका नगरभित्रका हरेक समस्या एमालेले समाधान गर्ने उनले बताइन्। चुनावी प्रचारमा तिब्र रुपमा खटिएकी जोगमायाले मध्यविन्दु नगरपालिका एमालेले जित्‍ने बताइन्। उनी भन्छिन्-‘मध्यविन्दुमा एमालेको निकै राम्रो छ। यहाका जनता पनि एमालेलाई नै चाहनुभएको छ। मध्यविन्दुको जनता एमालेको पक्षमा हुनुहुन्छ।’